Date My Pet » Chii Women Funga About Munguva Sex
Last updated: Oct. 16 2020 | 2 Maminitsi verenga
Nepo sex chaiyo, dyidzana, mu-the-nguva chiito, dzimwe nguva pfungwa vakadzi inowanzoita kuti kutsauka, zvisinei kukura zvepabonde. Pazasi inongova mimwe pfungwa zvinogona kupinda pfungwa chemadzimai panguva kurara.
TV Shows / Movies: Ungave achangobva firimu zvikuru kana vari pakati ane yepaTV, dzimwe nguva pokuongororazve Zano uye vatambi rikauya panguva pabonde. Hatigoni kubatsira kana tine “ane-ha” nguva pakati bonde, zvinongoreva zvinoreva kuti zvepabonde kuti mukanwa.
dhinha: Men, kana iwe zvichaitika kutsvaira mudzimai dzako patsoka dzake paakangowana anopinda musuo wake basa zuva mikana iye achafungisisa chisvusvuro uchiri mukati maro. Hatigoni kubatsira kana tinokwanisa multitask, ndinoiitawo ngatiite kuva vakatendeseka, pabonde Kazhinji anoshanda kumusoro dumbu uye achiziva zvaunoda kuti zvichakubatsira kuwana chisvusvuro vagadzirira kuti zvikuru nokukurumidza.
kuchinja nzvimbo: Ngatimbotaurei zvazviri, dzimwe nguva tiri kure-sync pamwe vamwe vedu. Zviri kunyanya kuipa kana mumwe ari kunakidzwa kupfuura vamwe. Apo vakadzi ona vakomana vavo chaizvo mune mumwe nzvimbo, havangavi kureva imwe itsva kubva kwedu mafaro kunobva pakuita kwedu murume ngaave. Kana izvi zvaitika, pfungwa “Ndiye zvakare kupinda chinzvimbo ichi kuti achinje. Ndinofanira kuva mariri sezvaakanga zvikuru sezvo ari”, “nei tisiri kuita kuti imwe nzvimbo itsva isu chete vakaedza uye akada?”, uye / kana “fura, nei chinzvimbo ichi kukuvara?” mifananidzo inokukurudzira kupinda uropi hwedu.
New nzvimbo: Nepo nokuchinja naro pamubhedha nguva dzose pfungwa yakanaka, kwete nzvimbo dzose dziri nyore sezvo ivo sokuti. Zvakakosha kuti unakirwe uye seka, kunyanya kana nzvimbo chete vanoita sevasinganyanyi kushanda. kubva “Iye netsaona akaverevedza nawo isiri mugomba” kuti “anogona nomumwe wedu kusvika lube pasina anowira” kuti “Ndinofunga kuti fart kana tikaramba kuenda here zvakadai”, Mirangariro zvose dzingadai vanogona kuenda kuburikidza vakadzi pfungwa.
Orgasms: Ladies, isu tose tinoziva kuti imwe nguva isu Cum pamberi murume wedu. Kunyange zvazvo izvi arege kuva kakawanda kuwanika, zvoitika nguva nenguva. uye apo, kunyange pashure zvepabonde wedu, zvepabonde anonzwa zvinoshamisa, isuwo tinoda kufadza mumwe wedu. Zviri nguva izvi apo vakadzi vanofunga “Kana ini veduwe kwazvo, pamwe achamubatsira Cum”.
Pets: Tose kuda kwedu dzinovaraidza sezvavari inokosha chaizvo nhengo yemhuri. Nokuda kuti tinowanzotevedzera kuchengeta musuo panguva pabonde sezvo meows, barks, uye scratching pamukova panguva pabonde inogona dzivaidza ari kufara. zvisinei, vane sarudzo iyi kunouya kukokwa kuti shamwari yako Negima kuti arinde imi pabonde. Hazvina kana tikacherechedza ziso ravo kuti tinofunga “Handigoni kurara pamwe dzinovaraidza wangu kundiona” kana “Ko iye / iye kutamira pedyo nesu? Handidi pabonde yedu kuti kumbomiswa”.
usatya, varume sezvo kunyange sezvo pfungwa idzi vaende kuburikidza vakadzi pfungwa, zvepabonde achiri kunakidzwa chaizvo. uye vakadzi, haufaniri kunetseka sezvo usiri oga multi-anofunga munguva pabonde.